बलिउड इन्डष्ट्रीको भिलेज ब्वाई प्रोडक्शनले नेपाली मिडियासँग सहकार्य गर्ने - Yugantar Khabar | News Portal
राकेश पासवान बलिउड फिल्म , टेलिफिल्म र मिडिया एजेन्सीको क्षेत्रमा चीरपरिचित नाम हो । उहाँले उद्योगी पुस्कर झाको साथमा खोल्नुभएको भिलेज ब्वाई प्रोडक्शन प्रा.लि. बलिउड टेलिभिजन दुनियाँमा एकछत्र राज गर्न सफल छ । लेखन, निर्देशन र निर्माणको त्रिवेणीमा आफ्नो कर्मलाई निरन्तरता दिंदै आउनुभएका पासवान प्रतिभावान र क्षमतावान व्यक्तित्वको रुपमा नब्बेको दशक देखि नै स्थापित हुनुहुन्छ ।
सिर्जनशीलता , लगनशीलता र मनोरञ्जनको थिम सहित स्थापित भिलेज ब्वाई प्रोडक्शन प्रा.लि. ले बलिउड फिल्म , टेलिफिल्म तथा मिडियाका क्षेत्रमा ISO 9001 सर्टिफिकेट प्राप्त गऱ्यो सन् २०१५ मा । शहरी तथा ग्रामीण पात्रहरूको जीवनशैलीको सुक्ष्म प्रस्तुति तथा नीतिगत सामाजिक यथार्थता सहितको चरित्रचित्रण गर्न रुचाउने लेखक राकेश पासवानले भिलेज ब्वाई प्रोडक्शनलाई त्यस्तै रूप दिनुभयो – जसका कारण बलिउड जगत्‌मा छुट्टै पहिचान स्थापित हुन पुग्‍यो ।
जी टिभीबाट प्रशारण हुने दुल्हन , सर्भिसवाले बहु , अफसर बेटिया ; सोनी टिभीबाट प्रशारण हुने एक लड्की अन्जानी से , कुल बधु , थोड़ी खुशी थोड़ी गम ; स्टार प्लसबाट प्रशारण हुने छुन हे आसमान , सन्तान , हमारी देवरानी , एक घर बनाउङ्‌गा ; कलर्सबाट प्रशारण हुने भाग्य विधाता ; एण्ड टिभीबाट प्रशारण हुने विटी विजनेशवाली ; डीडी किसनबाट प्रशारण हुने छु लो आसमान र द्रौपदी तथा एनडीटीभी इमाजीनबाट प्रशारण हुने लुटेरी दुल्हन र बाबा ऐसा वर ढुडिए लगायतका टेलिश्रृङ्‌खला राकेश पासवानका सिर्जनशील मष्तिस्कका उपज हुन् भने भिलेज ब्वाई प्रोडक्शनका उत्पादन पनि ।
इन्डियन टेली अवार्ड २०१२ मा सोसल मेसेजतर्फ बेस्ट प्रोग्राम अवार्ड र बेस्ट लिरिक्स अवार्ड प्राप्त टेलीश्रृङ्खला अफसर वीटिया राकेशको मनपर्ने सिर्जना मध्येको एक हो । भारतीय समाजको छोरीचेलीको परम्परागत जीवनशैली प्रतिको विद्रोह पस्किएको कथाले धेरैलाई प्रेरित गरेको छ । हुन त राकेश पासवान सामाजिक चेतना र जागरणका कथा बुन्न सिपालु लेखक हुनुहुन्छ । उहाँका प्रत्येक कथा प्रेरणाप्रद हुन्छन् । र नामाकरण पनि त्यस्तै । जस्तो कि सर्भिसवाले बहु , वीटी विजनेशवाली ।
राकेश पासवानलाई नजिकबाट साथ दिंदै आउनुभएका पुस्कर झा काम गर्न सजिलो मान्छेको रूपमा परिभाषित गर्नुहुन्छ उहाँलाई । विशेषतः निर्माणमा सहयोग गर्दै आइरहनु भएका झा पासवानको लेखकीय र निर्देशकीय खुबीको मुक्तकण्ठले तारिफ गर्नुहुन्छ । भिलेज ब्वाई प्रोडक्शन प्रा.लि . का मार्फतबाट नेपाल लगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँग फिल्म , टेलिफिल्म , डकुमेन्ट्री निर्माण लगायतका कार्यमा सहकार्य गर्ने रणनीति रहेको पुस्कर झाको भनाइ छ । त्यसका लागि कुराकानी भइरहेको र छिट्टै नेपाली प्रोडक्शन हाउससँग सहकार्य गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । नेपाल लगायतका छिमेकी मुलुकहरूमा सुटिङ गर्ने सहज प्रबन्ध र भारतमा छिमेकी मुलुकहरुको लागि सहज प्रबन्ध हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
निर्देशक सुदर्शन थापा र मोडल सुप्रिया बीच इन्गेजमेन्ट सम्पन्न